လျှပ်စစ်မီးဖိုထဲ thermo သတ္တုတွင်း၏ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း China Manufacturer
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: မိုင်းအဘို့မြေမှုန့်ကောက်ခံရေး,မိုင်းနယ်များအတွက်ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး,အဆိုပါမိုင်းဟာဖုန်ကောက်ခံရေးသယ်ယူပို့ဆောင်
Home > ထုတ်ကုန်များ > လူပျိုစက်ဖုန်ကောက်ခံရေး > လျှပ်စစ်မီးဖိုထဲ thermo သတ္တုတွင်း၏ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း
 လျှပ်စစ်မီးဖိုထဲ thermo သတ္တုတွင်း၏ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း
လျှပ်စစ်မီးဖိုထဲ thermo သတ္တုတွင်း၏ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းထက်ဝက်အဖုံး, အပြည့်အဝအဖုံး, အပြည့်အဝအဖုံးကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည်။ ထိပ်တန်းအနောက်ပါးပျဉ်းသို့မဟုတ်အလှည့်အဖုံး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကဒီဇိုင်းလျှပ်စစ်မီးဖိုထဲဖုန်မှုန့်စုဆောင်း၏ PL အိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုအာမခံမယ့်အထည်အိတ်နှင့်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းများ၏ရှေ့မှောက်၌တစ်ဦးမီးပွားအဖြည့်အဖြစ်ထက်ပိုမို 260 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှအမြင့်ဆုံးအပူချိန်နှင့်အတူမြင့်မားတဲ့အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည်ပစ္စည်းဖန်ဆင်းထားသည် ပစ္စည်းကိရိယာ။ အပြည့်အဝလည်ပတ်။
အဆိုပါလျှပ်စစ်မီးဖိုထဲအိတ် filter ကို system ကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောပစ္စည်းကိရိယာများမရှိ image ကိုပုံမှန်ရောစပ်စစ်ဆင်ရေးအဆင်ပြေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုရှိပါတယ်။
2. အဆိုပါ flue ဓာတ်ငွေ့ဖမ်းယူရိုက်ကူး၏လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးသည်။
မီးခိုးများနှင့်ဖုန်မှုန့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ၏ခေါင်မိုးပေါ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်3flue ဓာတ်ငွေ့ဖမ်းယူမှုနှုန်း> 98% ဖြစ်ပါတယ်။
4,> 99% မြေမှုန့်ကိုဖယ်ရှား၏ထိရောက်မှု။
5. အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအတွက်ပို့စ်၏ဖုန်မှုန့်အာရုံစူးစိုက်မှု <10mg / m3 ဖြစ်ခဲ့သည်။
7. လေတိုက်စက်အခန်းတစ်ခန်း၏ဆူညံသံ <80dB ဖြစ်ပါတယ်။
8. flue မပြာစုဆောင်းခြင်းရှိပါသည်။
Related Products List: မိုင်းအဘို့မြေမှုန့်ကောက်ခံရေး , မိုင်းနယ်များအတွက်ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး , အဆိုပါမိုင်းဟာဖုန်ကောက်ခံရေးသယ်ယူပို့ဆောင် , ရောင်းမည်ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး , ဘွိုင်လာစိုစွတ်ဖုန်ကောက်ခံရေး , ကွိဘူတာအဘို့မြေမှုန့်ငွေကောက်ခံ Bag , မိုင်းစက်မှု Bag ဖုန်ကောက်ခံရေး , ဘွိုင်လာအိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေး